translation abafanelekayo umbhalo noma idokhumenti isihloko oyifunayo ezingase ziphakame nganoma yisiphi isikhathi. Ngakho, zokuxhumana ibhizinisi ngokubambisana, ikakhulukazi uma ehlangene nemisebenzi namanye amazwe adinga ifa lonke ulwazi, exchange of idatha kanye imibhalo, okuvumela ezimbili ngendlela umsebenzi ezingeni elifanele. Ikakhulukazi ngokubambisana, okuyinto lihlotshaniswa ukungenisa - zokuthumela zasendlini, okudinga ukuhunyushwa ngemibhalo yomsebenzi, ukugcwaliswa kahle amakhadi izimpahla, kanye nolwazi lobuchwepheshe. Ngezinhloso enjalo, kufanele kusetshenziswe translation eliphezulu, okuzokwenza usebenze bese usebenzisa imikhiqizo nezinye izinjongo. Ukubaluleka nokudluliswa amaphepha adingekayo akungatshazwa, njengoba kwenza ukuthuthukiswa nokubambisana, kanye ukuchuma ibhizinisi.
Ukuhumusha kwemibhalo futhi kwasayinwa, okungenani into ebalulekile ukuhlinzekwa kwemisebenzi yomphakathi, kanye lapho kunesidingo ukuze uthumele design, edingekayo ukuhlinzeka eqinisekisiwe iziphathimandla zikahulumeni dokhumenti, evumela iziphathimandla. Ukwenza lo uhlobo ukudluliswa walandisa umthwalo umsebenzi njengoba kule dokhumenti zincike yokubhalisa, ukukhipha izimvume futhi zikhishwa, akhaeunti amaphepha adingekayo, elenziwe ngesisekelo ukuhunyushwa.
Ukuhumusha kwemibhalo ezidinga notarization ngumuntu umsebenzi ofanelekayo ubani amakhono adingekayo kwesicelo amafomu kwezilimi imiklamo, eziqephuzayo kahle ulimi yokuqala, futhi kungaba kahle ukwakha isakhiwo idokhumenti, ukwazi injongo yawo ebanzi. A isiqinisekiso notarization, kwenza ukusetshenziswa nguqulo njengeyingozi 'insimbi kunesidingo, okuhlukeneko kwesokudla yokuqala, ngosizo okuyinto kungenzeka ukufakazela neziqu noma ilungelo ukwenza imisebenzi ethile edingekayo noma imisebenzi.
Ngakho, idokhumenti translation and isitifiketi ummeli olungisa izivumelwano kwenza kube nokwenzeka ukuba athole ilungelo kudingekile ukwenza imisebenzi ethile, uqinisekise lezi zimfanelo ezidingekayo, futhi ngokomthetho ukwenza umsebenzi. Okokuqala, idokhumenti translation kanye nokukhipha izitifiketi ummeli olungisa izivumelwano zakhe, ukunika ilungelo, ukuqashelwa ezweni we okulingana idokhumenti bese equivalently, evumela ukusetshenziswa ekuphileni kwansuku zonke futhi zonke izindawo umsebenzi.
Futhi, i-ejensi translation eyenza notarization wokuhunyushwa amadokhumenti, kufanele kube accredited kahle ezingeni lokuhumusha.